Iyo kinetics yekudziisa induction yekumisa pamusoro pesimbi
Iyo kinetics yekudziisa induction yekumisa pamusoro pesimbi zvinoenderana nezvinhu: 1) zvinokonzeresa shanduko mumagetsi nemagineti emagetsi simbi semhedzisiro yekuwedzera tembiricha (shanduko idzi dzinotungamira mukuchinja kwehuwandu hwekupisa kwakapinza pasimba rakapihwa remagetsi magetsi pane yakapihwa induction yazvino) uye, 2) pazvinhu zvinokonzeresa shanduko yesimba remagetsi emagetsi panguva yekupisa (kureva., shanduko yezvazvino mune inductor).
Izvi zvinhu zvine chekuita neshanduko yemipimo yevanopinda mukati mekupisa kwesimbi uye ku
izvo zvakasarudzika zveakapihwa dhizaini yeakakwira-frequency zvishandiso, kureva, kuti simba rinoshandiswa rinodzorwa panguva yekudziya. Muzviitiko zvakawanda kusimba kwemagetsi emagetsi eiyo inductor haigare yakangogara panguva yekupisa, uye shanduko iyi inokanganisa chimiro cheye tembiricha-yenguva nguva.
Induction Kutya Mukupisa kwekupisa kwenzvimbo dzemotokari kwakatanga kushandiswa pamuti wedu. Muna 1937-1938 pamusoro
kudzima mitsipa yemakona emagetsi eZIS-5 injini yakagadzirwa pachigadzirwa chedu nekubatana nevashandi
yeVP Vologdin rabhoritari. Iyo michina yakaiswa sechikamu cheiyo inoenderera yekugadzira tambo, umo
izvo zvikamu zvakaiswa pasi pehunyanzvi kurapwa pane semi-otomatiki yakakwira-frequency zvigadzirwa. Kupfuura 61% ye
alt zvikamu zveinjini zve ~ ae ZIL-164A uye ZIL-157K mota ari pamusoro akaomeswa ne induction kupisa.
Pamusoro Kuchenesa kweMuchina Zvikamu Mushure Induction Heating.
Induction kupisa kunoshandiswa zvakanyanya pakurapa kwepamusoro kwezvikamu.
Categories Technologies Tags induction heat, induction kupisa pamusoro, induction unopedza hita, induction kudzima muchina, induction inodzima pamusoro, kuburitsa kudzima system, induction pamusoro kudzima, kudzima kwepamusoro, pamusoro unopedza simbi Post navigation